Icandelo lencwadi, yonke into ekufuneka uyazi ngayo | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Iincwadi, Iincwadi, Ezahlukeneyo
Kuyamangalisa ukuba umfundi ayeke ukuhlalutya onke amalungu encwadi. Ngokwesiqhelo, iimpawu zoyilo loovimba uxabisekileyo aziqwalaselwa., kuba umxholo wayo uthathwa njengeyona nto ifanelekileyo. Ukuphelisa oku kuxabisa, ekwakhiweni kwencwadi sifumana izinto ezibaluleke kakhulu, esingafanele sizityeshele.
Incwadi iyeyona nto ibonakalisayo kuphuhliso lwempucuko yoluntu. Inokuhlulwa, enyanisweni, njengomkhombe okhusela ulwazi lwabantu. Okwangoku, abafundi banazo zombini iincwadi eziprintiweyo nezidijithali. Ezi zokugqibela zahlukile kwiinguqulelo zazo ezibonakalayo kuphela ngokwakhiwa kwazo kwangaphandle, nangona kunjalo, ziyangqinelana nezinto zangaphakathi. Indlela esenziwe ngayo esi sibonelelo iya kuchazwa ngokweenkcukacha apha ngezantsi:
1 Iindawo zencwadi
1.1 Ubume bangaphandle bencwadi
1.1.1 Ibhatyi yothuli
1.2 Ubume bangaphakathi bencwadi
1.2.1 Iphepha lokuqala okanye lokuqala
1.2.1.2 Uqweqwe olungasemva
1.2.1.3 Ngaphambili okanye kwiFacade
1.2.1.4 Ikhredithi iphepha
1.2.1.7 Intshayelelo okanye intshayelelo
1.2.2 Umzimba ophambili
1.2.3 Amaphepha okugqibela
1.2.3.3 Isihlomelo okanye izihlomelo
Okokuqala, kufuneka sicacise ukuba -ngokuya kwi-UNESCO- Ukuze incwadi ithathelwe ingqalelo enjalo, kufuneka okungenani ibenamaphepha angama-49. Ngaphandle koko, ukuba eli nani lisezantsi, lidwelisiwe njengencwadana. Emva kokucacisa le ngongoma, incwadi yenziwe ngamacandelo amabini aphambili: ngaphandle nangaphakathi.
Ubume bangaphandle bencwadi
Yenziwe ngawo onke la malungu owona msebenzi wawo uphambili kukukhusela amaphepha encwadi. Phakathi kwabo sine:
Ikwabizwa ngokuba yi "shirt" okanye "iyonke". Sisiqwenga sephepha (esiqhele ukuqaqamba) esinobude obufanayo nencwadi esebenza njengelining.
Ubume bangaphandle bencwadi.
Inxalenye yangaphandle ekhusela incwadi. Ihlala yenziwe ngezinto ezishinyeneyo ezifana nekhadibhodi, isikhumba okanye iplastiki. Kuyo sifumana isihloko sencwadi, umbhali kunye nemifanekiso ethile ukuze siyenze yahluke ngakumbi kwaye kwangaxeshanye ibe nomtsalane ngakumbi kubafundi. Isigqubuthelo esingasemva kubhekiswa kuso njengesiciko esingasemva
Abalindi ngala maphepha asongiweyo adibanisa ikhava kunye neqweqwe elingasemva nangaphakathi kwincwadi. Ezi zingenanto okanye ziyilo oluthile. Umsebenzi wayo, ngokuqinisekileyo, wokuhombisa. Ngamanye amaxesha sinokugcinwa kwiphepha elixineneyo kunelamaphepha encwadi.
Zizo ezo iithebhu ezongezelelweyo ezinokuba yinxalenye yebhatyi yothuli okanye ikhava. Kuzo uya kufumana-kwiimeko ezininzi-i-biografi yombhali okanye isishwankathelo sencwadi. Ngamanye amaxesha isetyenziselwa ukwahlula abanye abafundi.
Kulapho aqhotyoshelwe khona onke amaphepha encwadi. Kuxhomekeke kwinani lamashiti, anokuza edityaniswe, ancanyathiselwe okanye athungelwe kuwo. Emqolo sifumana idatha efana nale:
Eli candelo liyimfuneko, ngakumbi kumathala eencwadi, kuba iququzelela indawo ekuyo incwadi.
Ubume bangaphakathi bencwadi
Ikwabizwa ngokuba yithumbu, yinxalenye enamagqabi encwadi. Oku kubandakanya amacandelo amathathu aphambili, angala:
Iphepha lokuqala okanye lokuqala
Ziseti zamaphepha andulela umzimba ophambili. Phakathi kwabo sine:
Ikwabizwa ngokuba "sisimbozo sobuxoki" okanye "isiciko sangaphambili" Ibekwe phambi kwekhava kwaye likhasi lokuqala elinesihloko sencwadi kunye negama lombhali (eshwankathelwe).
Ingumva okanye ivesi yephepha lesihloko, elijongene nephepha lesihloko. Kuyo sinokufumana isishwankathelo esifutshane somsebenzi kunye nezibakala ezinomdla ezinje ngokuqokelelwa. Kukwaziwa nangamagama anje:
Ngaphambili okanye kwiFacade
Oku, ngamanye amaxesha, kunokuqwalaselwa njengephepha lokuqala lencwadi. Ngokuqinisekileyo, nangona ingadweliswanga. Inesihloko esipheleleyo somsebenzi negama lombhali, kunye nedatha efana nale:
Ikwabizwa ngokuba liphepha elisemthethweni. Siyifumana emva nje kwekhava kwaye iqulethe yonke idatha malunga nomnini welungelo lokushicilela, i-ISBN kunye nedipozithi esemthethweni. Ukongeza, kufuneka iqulethe idatha efana negama lenkampani kunye nedilesi yenkampani yokupapasha kunye nonyaka wokupapashwa komcimbi.
Ubume bangaphakathi bencwadi.
Yiphepha apho sinokufumana khona amagama ombhali enikezela umsebenzi wakhe kumntu omnye okanye ngaphezulu.
Ikwabizwa ngokuba yi "motto", liphepha elicaphula isicatshulwa ngumbhali owahlukileyo kunalowo usayine incwadi. Oku kunokugcina ulwazi malunga nento ephefumlele umbhali okanye umxholo oqhelekileyo ngomxholo.
Intshayelelo okanye intshayelelo
Umbhali unika isishwankathelo sokuba incwadi ingantoni kwaye umfundi uza kufumana ntoni kuyo.
Ikwabizwa ngokuba yingabula-zigcawu. Eli phepha iqulethe ntetho umxholo. Ibekwe kumaphepha okuqala encwadi kwaye inokubhalwa ngumbhali okanye yingcali emsebenzini.
Inokufumaneka kumaphepha angaphambili okanye angasemva encwadi. La maqela umxholo womsebenzi ocwangciswe ngezahluko ngohlobo lwesishwankathelo. Kubalulekile ukufumana naluphi na ulwazi oluthile. Ngamanye amaxesha singayifumana phantsi kwegama elithi "isishwankathelo" okanye "itafile yemixholo".
Inolwazi oluneenkcukacha malunga nezifinyezo, iitshathi okanye iitafile ezinokunceda ukuhlanganisa incwadi.
Yeyona block inelona nani likhulu lamaphepha, kuba iqulethe umxholo wencwadi. Ngaphandle komzimba ophambili, incwadi ayinakubakho. Amanye amalungu ayongeza kuyo. Inokwahlulahlulwa ibe lelinye:
Ezi zifumaneka emva komzimba ophambili. Njengoko igama labo lichaza, bafumaneka ekupheleni kwencwadi. Phakathi kwezi, sine:
Eli candelo lenza ukuphindwaphindwa kwawo wonke umxholo womsebenzi. Kwelinye icala, ikwasoloko isombulula iziza ezingagqitywanga kwaye inike isigqibo esifanelekileyo.
Eli candelo lenza isishwankathelo somsebenzi ngokubanzi.
Isihlomelo okanye izihlomelo
Inolwazi oluncedisayo malunga nomsebenzi. Inezinto ezingabalulekanga kangako ezinokusinceda siqonde iindinyana ezithile.
Kule nxalenye, naluphi na uhlobo lomthombo apho umbhali anokuxhaswa khona lukhankanyiwe. Ukufezekiswa komsebenzi.
Ngamanye amaxesha sifumana amanqaku ekupheleni kwencwadi, nangona ezi zinokuba sezantsi ephepheni.
Kule nxalenye sifumana amagama athile anentsingiselo yawo ukukunceda uqonde umsebenzi ngokucacileyo.
Ibandakanya iinkcukacha zomkhondo wonke wombhali. Singayifumana ekupheleni kwencwadi okanye kwi-flap.
Inedatha yoshicilelo lwencwadi kunye nomhla wencwadi. Siphantse siyifumana kwiphepha lokugqibela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iinxalenye zencwadi